Zikrii fi Salaata Archives - Ibsaa Jireenyaa
Category: Zikrii fi Salaata
November 8, 2020 Sammubani Leave a comment
Humraan akkana jechuun gabaase: Usmaan ibn Affaan (radiyallahu anhu) bishaan wudu’aa akka isaaf fidan ajaje. Ergasii innis wudu’achuu jalqabe. Harka isaa si’a sadii sadii dhiqatee. Ergasii afaan isaa ni shafatee, funyaan isaa keessa bishaan seensisuun ni baase. Ergasii fuula isaa si’a sadii dhiqe. Ergasii hanga ciqilee gahuutti harka isaa mirgaa si’a sadii ni dhiqe. Akkuma kana harka isaa bitaas ni dhiqe. Ergasii mataa isaa ni haxaawe. Ergasii miila isaa mirgaa hanga kiyyoo gahuutti ni dhiqe. Ergasii akkuma kana miila isaa bitaas ni dhiqe. Ergasii akkana jedhe: Ergamaan Rabbii sallallahu aleyh wassallam wudu’a akka kiyyaa kana kan wudu’atu arge. Ergasii Ergamaan Rabbii sallallahu aleyh wassallam akkana jedhe: “Namni wudu’a akka kiyyaa kana wudu’atee ergasii olka’ee osoo nafsee isaatti homaa hin hasaasin raka’aa lama salaate, badii isaa irraa wanti darbe isaaf araaramama.” Sahiih Muslim 226
Itti Haa Fufnu
November 1, 2020 Sammubani Leave a comment
Akka lugaatti wudu’uni jecha wadaa’ah jedhu irraa kan fudhatameedha. Wadaa’ah jechuun qulqullinnaa fi bareedinna. Akka shari’aatti wudu’a jechuun kutaalee qaamaa afran qulqulleessuuf bishaan fayyadamuudha. Kutaaleen qaamaa kunniinis: fuula, harka lamaan, mataa fi miila lamaan.
Sunan Al-Fixrah fi Gosoota Bishaanii
October 24, 2020 Sammubani Leave a comment
Sunan Fixraan amala uumamaati. Namni yommuu sunan fixraa kana hojjate uumama Rabbiin namoota irratti uume fi isaaniif jaallateen ibsama. Abu Hureyraan akka gabaasetti Ergamaan Rabbii (Sallallahu aleyh wassallam) akkana jedhan: “Wantoonni shan fixrah irraayyi: Kittaanachuu, rifeensa naannawa qaama hormaataa haadu, afkarroo muruu, qeensa (kottee) ciruu fi rifeensa bobaa buqqisuudha.” Sahiih Al-Bukhaari 5891
Naamusa Mana Fincaani seenuu fi bahuu
October 18, 2020 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbe keessatti akkaata najaasa qulqulleessan, istinjaa’a fi istijmaara maal akka ta’an ilaalle turre. Istinjaa’a jechuun bishaaniin qaama hormaataa fi taa’aa qulqulleessudha. Istijmaarri immoo wanta gogaa qulqulluun kan akka dhagaa fi sooftin of qulqulleessudha. Amma, asi gadiitti naamusa yeroo mana fincaani seenanii fi bahanii ni ilaalla.
Akkaataa Najaasaa Itti Qulqulleessan
October 17, 2020 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbe keessatti gosoota najaasaa ilaalle jirra. Dhugumatti najaasaa beekanii irraa fagaachu fi ofirraa qulqulleessuun Muslima hunda irratti dirqama. Sababni isaas, salaanni fi ibaadan biroo qulqullinna barbaadan sirrii ta’uu fi qeebalamuuf najaasa irraa qulqullaa’un sharxiidha. Eega waa’ee najaasaa ilaalle, amma immoo gabaabbinnaan akkaata najaasaa itti qulqulleessan ilaalla.
October 10, 2020 Sammubani Leave a comment
Torbaan darbe mata duree “Salaata-utubaa Islaama” jedhu jalatti, waa’ee xahaaraa ilaalu jalqabne jirra. Har’as itti fuuun waa’ee najaasaa fi gosoota isaa ni ilaalla. Najaasaa jechuun namoota biratti jibbisiisaa kan ta’eedha. Namoonni najaasaa irraa of eegu, yommuu uffata isaanii tuqe ni dhiqu. Fakkeenyaaf, fincaan, sagaraa fi kkf najaasadha. Akkuma wanti tokko haraama jechuuf ragaa (daliila) shari’aa barbaachisu, wanta tokkoon najaasadha jechuudhaafis ragaa barbaachisa. Namni wanta tokkoon najaasadha jedhu, ragaa akka fidu isarraa eeggama. Wantoonni najaasaa ta’uu isaanii shari’aan mirkaneesse kanneen armaan gadiiti:
October 4, 2020 Sammubani One comment
Dhugumatti Faaruun hundi kan Rabbiiti. Isa ni faarsina, ni gargaarsifanna, araarama Isa kadhanna. Sharriwwan nafsee teenyaa fi hamtuwwan hojiiwwan keenyaa irraa Rabbiin eeggamna. Nama Rabbiin qajeelche kan isa jallisu hin jiru. Nama Rabbiin jallise kan isa qajeelchu hin jiru. Rabbii Tokkicha shariika hin qabne malee haqaan gabbaramaan akka hin jirre ragaa nan baha. Akkasumas, Muhammad gabrichaa fi Ergamaa Isaa ta’uu ragaa nan baha.
Xahaaraa fi salaata nama rakkoo fincaanii fi dhiigaa qabuu﻿
September 2, 2018 Sammubani Leave a comment
Gaafii: Coccobni fincaanii akka narraa bahuu natti dhagahama. Waa’ee salaataa ilaalchisee nan gaafadhe. “Waqtii salaata hundaaf wudu’adhuu hanga feete salaati. Waqtiin salaataa biraa yoo seene wudu’aa haarawa wudu’adhu” jedhame. Gaafin kiyya kana: Waqtiin salaataa seenun dura wudu’achuun naaf hayyamama? Fakkeenyaf Masjiida keessatti salaata jama’aa dhaqqabachuuf. Yeroo manaa bahe iddoo jireenyaa irraa fagoo ta’u, wudu’a salaata waqtiin isaa gaheen salaatu nan danda’aa? Yoo suni hin hayyamamiin, uffata jalaa qulqulleessuu fi wudu’a godhee salaatuf maal gochuu qabaa? Wudu’a tokkoon salaata dheeraa kan akka Ishaa’i ergasii taraawii salaatu nan danda’a? Jazakumullahu kheyran…
May 9, 2018 Sammubani One comment
Salaanni utubaalee Islaamaa keessaa sadarkaa lamaffaa irratti kan argamuudha. Salaanni Gooftaa fi gabricha kan wal-qabsiisudha. Gargaarsa fi araarama Rabbiin irraa kan barbaadan salaata salaatuni. Osoo salaanni jiraachu baate silaa jireenyi tuni dhama (mi’aa) dhabdi. Salaanni qalbiif tasgabbii, qaamaf jabeenya, hawaasaf nageenya ta’a. Rabbiin subhaanahu wa ta’aala Qur’aana keessatti ni jedha: Read more
Arkaana (rogoota) salaataa yommuu jennu salaatatti erga seenanii booda wantoota dirqamaan guuttamu qabanii jechuudha. Wantoonni kunniin yoo hafan akka shari’aatti salaanni guutuu hin ta’u. Shuruuxa fi Arkaana akka walitti hin naqne. Shuruuxa yommuu jennu salaatatti seenun dura hal-dureewwan guuttamuu qaban yommuu ta’uu harkaanni salaataa immoo erga salaatatti seenanii booda ulaagaalee guuttamu qabaniidha. Read more